Yaya Toure oo xushay shaxda 11-ka ciyaaryahan ee ugu Wanaagsan uu la soo ciyaaray Waayihiisa ciyaareed….(SHAXDA oo dad badan ka YAABISAY) – Gool FM
Yaya Toure oo xushay shaxda 11-ka ciyaaryahan ee ugu Wanaagsan uu la soo ciyaaray Waayihiisa ciyaareed….(SHAXDA oo dad badan ka YAABISAY)
(Yurub) 15 Jan 2019. Laacibka reer Ivory Coast ee Yaya Toure ayaa doortay shaxda ciyaartoydii ugu fiicnayd uu kasoo garab ciyaaray xirfadiisa kubada cagta.
Yaya Toure ayaa wuxuu qeyb ka soo noqday kooxo ay ka mid yihiin Monaco, Barcelona, Manchester City iyo kooxda uu haatan qeybta ka yahay ee Olympiakos.
Khadka dhexe reer Ivory Coast ayaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay ciyaartoyda ugu fiican ee soo martay kooxda Manchester City, wuxuu u soo ciyaaray kulamo gaarsiisan ilaa iyo 300 kulan, 8 xili ciyaareed uu la soo qaatay, wuxuuna la qaaday 2 jeer ee h horyaalka Premier League.
Yaya Toure oo marti ku ahaa shabkada Sky Sports ayaa wax laga weydiiyay inuu soo xusho shaxda ciyaartoydii ugu fiicnayd uu kasoo garab ciyaaray xirfadiisa kubada cagta, kadib fikir badan uu sameeyay wuxuu soo xushay magacyada 11-kii ciyaaryahan ugu wanaagsan uu la soo ciyaaray xirfadiisa ciyaareed ee kubada cagta.
Waxaase yaab noqotay in Shaxdiisa ay ka koobnaata 6- weeraryahan, hal dhexe iyo saddex daafac.
Taageerayaal ku soo hadlay baraha bulshada ayaa ka jeex jeexay shaxda Toure halka kuwa kalena ay aad ula dheceen iyagoona sheegay in marka uu tabaabre noqdo madadaalo badan oo weerar ah la heli doono